Semalt Nyanzvi dzeZvirevo Kusiyana pakati pe301 Redirects Uye 302 Redirects
Kana mavhareji ewebhu ari kushanda pamapeji ewebhu akasiyana-siyana kana mamiriro ehutano akanyorwa uye akabudiswa kune mamwe mabasa, imwe yezvinetso zvakajairika ndeye code 200. Zvinoreva kuti peji kana kuti webhu yako inotungamirirwa kune chimwe chinhu chinopusa uye vaseki vangave vachida kupinda mukati pewebsite yako nekurwisa hurongwa hwako. Chimwe chimiro chinowanikwa chimiro chema 301, apo 302 ne404 zvinoonekwawo nguva nenguva. Zviri pachena, unofanira kunge uri kutsvaga mamwe mazano ekuti uzvidzivirire. Apo mapeji ako ewebhu akaiswa zvakare ne server-level redirects, iwe ungatanga kuona ikhodi 300 - best tour companies south america.
301 inogara ichitsvaga zvakare apo 302 ichitsvaga zvakare, izvo zvinoreva kuti unogona kubvisa 302 kana iwe uchitarisira zvinhu zvishomanana zvinotaurwa pano neMutengi weChipatendi Mutariri we Semalt , Michael Brown.
Nguva uye sei kushandisa 301 kutamisazve ?
Iko kunodzokorora 301 kunogara kuripo nekusingaperi, uye ndizvo zvatakakuudza kare. Inotaurira injini yekutsvaga s kuti peji yakatamiswa, yakabviswa, kana kubviswa, zvichida nekuda kwekugadzira zvimwe kana zvigadzirwa zvehutano. Nhamba iyi inogona kuchinja sarudzo yose uye zvinoreva saiti yako, kuparadza mukurumbira wayo mumaziso ezvinjini..Vanhu vazhinji vanotambura nemhosho iyi uye vanofanira kushandisa mbatya dzemachena SEO kudzivirira kusvika kwayo kusvika pamwero mukuru.
Zvinosuruvarisa kuti makambani akasiyana-siyana emakambani ekugadzirwa kwewebhu haana kukwanisa kukubatsira kubvisa zvinyorwa zvema301. Pane kudaro, vanoshandisa meta tags, uye maserivha 302 anotarisa zvakare kuchengetedza nzvimbo dzevatengi vavo dzakachengeteka. Regai ini pano ndikuudzei kuti iri tsika ine ngozi uye kutsvaga injini hakuzobvumi chero nzira dzekudzokorora.
Kubva pane SEO maonero, maitiro 301 akadzoka haagoni kuwana nzvimbo yako kukudzwa uye kuonekwa iwe ungangodaro wakatarisira paIndaneti. Uye kana iwe usingabhadhari nyaya iyi uye usisagadzirisa iwe nokukurumidza sezvinobvira, iwe unogona kuchinja zita rako remudunhu uye unogona kutora zvinyorwa zvako kubva pane imwe webhusaiti kune imwe. Vimba neni, izvi zvinogona kunge zvakanyanyisa uye zvingaita kuti iwe urege kurasikirwa newebsite yako mumatsva ekutsvaga.
Nei uchifanira kushandisa 302 kutamisazve ?
Chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekushandura 302 kutsiva ndeyekuchengetedza ma URL asina kunaka kuti awane indexed zvachose mumitsva yekutsvaga injini. Somuenzaniso, kana iwe wakagadzira webhusaiti yevanhu vakuru uye uchida kutungamirira peji rako kuenda pane imwe URL, unogona kushandisa izvi 302 zvakaresa zvakare nemitemo yakawanda uye dhesi data. Apo injini yekutsvaga inotora URL yako yepamusha, haufaniri kushungurudzika nokuti haigoni kuziva mapeji ayo uye zvinyorwa zvakanyorwa mukati. Vanogona kutsanangura nzvimbo yako seyakachengeteka. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti iwe unoda kutsvaga injini kuratidza nzvimbo yako saiyo xyz.com pane kubc.com, uye izvi zvinongowanikwa chete ne302.
Paunenge uchishandura zvakare 302, iwe haufaniri kutumira vashanyi vako kune mawebsite asingazivikanwe kana kuti ane chokwadi. Uyezve, zvakakosha kuti usarudzezve vataridzi vako pamapeji mamwechete sezvavanokwanisa kuneta uye vovhara mahwindo nekuvhara nzvimbo yako yeupenyu hwose.